အခြောက်လှန်းထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် အေးခဲထားသလဲ။ - အကောင်းဆုံး Freeze အခြောက်စားနပ်ရိက္ခာကြီးထွားလာ
အကောင်းဆုံးအေးခဲခြောက်အစားအစာ, Emergency food storage / အားဖြင့် အဒ်မင်
One of the key advantages of freeze-dried food is its shelf life. Freeze dried foods can last for years if not decades depending upon the freeze drying process, အခြောက်ခံထားသော အစားအစာများနှင့် အစားအစာ အမျိုးအစားကို သိမ်းဆည်းခြင်း။. Thrive Life သည် အေးခဲခြောက်သော အစားအစာများမှ ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။ 8 နှစ်တွေ တောက်လျှောက် 20 နှစ်ပေါင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏ အေးခဲအခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်နှင့် အအေးခဲထားသော အစားအစာခြောက်သည် မည်မျှကြာကြာခံနိုင်သည်ကို အသေးစိတ်သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့၏ အေးခဲခြောက်နေသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ အရည်အသွေးကို သင်အံ့သြသွားမည်ဖြစ်သည်။, အေးခဲထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးခြောက်လို အသီးခြောက်တွေကို အေးခဲထားပါ။.
With our innovative freeze drying process, we remove almost all water and lock in nutrients, which means Thrive foods will stay fresh foravery long time! သိုလှောင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သိုလှောင်မှုသက်တမ်း ကွဲပြားသည်။. ရိုးရှင်းသော ဟင်းပွဲများသည် အနည်းဆုံး ကြာရှည်ခံသည်။6သူတို့ကို သင်လက်ခံရရှိသည့်အချိန်မှ လများဖြစ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏စည်သွတ်ထုတ်ကုန်အများစုသည် ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်။ 25 မဖွင့်မီနှစ်များ— ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများမထည့်ဘဲ ၎င်းကိုပြုလုပ်သည်။!
အစားအစာထိန်းသိမ်းနည်းအားလုံးတွင် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများရှိသည်။. အခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏အာဟာရကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်သော အစားအစာဖန်တီးရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။. Shelf life is important when you’re looking for preserved foods for regular daily use or stocking up on emergency supplies.
အအေးခံထားသော အခြောက်ခံပစ္စည်းများ အများစုသည် “တာရှည်ခံသော သက်တမ်း” ရှိသည်။,"ဒါက အချက်နှစ်ချက်ထဲက တစ်ခုကို ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။. ပထမ, "အသုံးမပြုလျှင် အကောင်းဆုံး" သည် အစားအစာသည် ၎င်း၏မူလအရသာနှင့် အာဟာရအများစုကို ထိန်းထားနိုင်သည့် အချိန်ကာလကို ညွှန်ပြပါသည်။. ဤသည်မှာ ကုန်စုံဆိုင်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းအများစုတွင် ဖော်ပြထားသော ရက်စွဲဖြစ်သည်။. ပုံမှန်အားဖြင့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။, ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်.
“အသက်ကို တည်တံ့စေသော စင်သောဘဝလည်း ရှိပါသည်။,” ထုတ်ကုန်သည် ဆွေးမြေ့ခြင်း သို့မဟုတ် စားသုံး၍မရနိုင်ဘဲ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ တည်တံ့နေမည်ကို ညွှန်ပြသည်။. ၎င်းသည် နှစ်အနည်းငယ်မှ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အထိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဖြစ်နိုင်သည်။. ၎င်းအားလုံးသည် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၎င်း၏ သိုလှောင်မှုအခြေအနေများတွင် ဆင်းသက်လာသည်။.
အဓိက သိုလှောင်မှု အခြေအနေများစွာသည် အေးခဲခြောက်ထားသော အစားအစာများ၏ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
အောက်ဆီဂျင်: လေထုထဲက အောက်ဆီဂျင်က အာဟာရတွေအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်ပါတယ်။, ဗီတာမင်, အရသာ, နှင့် အစားအသောက်များတွင် အရောင်ဆိုးပါ။. ဘက်တီးရီးယားကဲ့သို့သော အဏုဇီဝပိုးမွှားများ ကြီးထွားမှုကိုလည်း တိုးစေနိုင်သည်။. သိုလှောင်မှုတွင် အစားအသောက်များတွင် လေလုံသောတံဆိပ်ရှိခြင်းသည် သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။.
အစိုဓာတ်: အစိုဓာတ်သည် အဏုဇီဝသက်ရှိများအတွက် အကျိုးပြုသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။, အေးခဲခြောက်ထားသော အစားအစာများ ယိုယွင်းပျက်စီး ယိုယွင်းလာစေသည်။. အစားအစာများကို စိုစွတ်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းသည့်အခါ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းသည် သိသိသာသာ တိုသွားပါသည်။.
အလင်း: အစာကို အလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ, ပရိုတင်းဓာတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။, ဗီတာမင်, ၎င်း၌ အာဟာရဓာတ်၊. ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့် အနံ့အရသာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။, ထို့ကြောင့် သင့်ထုတ်ကုန်များကို မှောင်သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရန် သေချာပါစေ။.
အပူချိန်: မြင့်မားသောအပူချိန်သည် ပရိုတင်းများကို ပြိုကွဲစေပြီး ဗီတာမင်များကို ပျက်စီးစေသည်။, အရောင်ထိခိုက်ခြင်း။, အရသာ, နှင့် ရှောက်သီး၏အနံ့. ပူနွေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အစားအစာသိုလှောင်ခြင်းသည် ၎င်း၏ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို လျင်မြန်စွာ ဆိုးရွားစေသည်။.